विमान दुर्घटनामा परेर पनि बाँचिन् यि भाग्यमानी नेपाली चेली…. – पुरा पढ्नुहोस्……
विमान दुर्घटनामा परेर पनि बाँचिन् यि भाग्यमानी नेपाली चेली….
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त यूएस बंगलाको जहाजबाट नेपाल फर्किने बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत १३ जना नेपाली विद्यार्थीमध्मे एक हुन् अछाम मंगलसेनकी प्रिन्सी धामी।प्रिन्सीले काठमाडौं बसुन्धारा बस्दै आएका परिवारलाई एक दिनअघि मात्र आफू नेपाल आउँदै गरेको खबर गरेकी थिइन्।
तर, उनी चढेको जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो। दुर्घटनामा उनी गम्भीर घाइते भइन्। उनको अहिले सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको आइसीयु ५०५ नम्बर बेडमा उपचार भइरहेकाे छ। तर, उनी खतरामुक्त नरहेको अस्पताले जनाएको छ।
सोमबार यूएस बंगलाको जहाज बंगलादेशको ढाका विमानस्थलबाट दिउँसो साढे १२ बजे काठमाडौंका लागि उडेको थियो। जहाजका चालक थिइन् पृथुला रसिद। उनी पहिलो पटक त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थलमा जहाज अवतरण गर्दै थिइन्।उसो त सोमबारको काठमाडौंको मौसम पनि त्यति सफा थिएन। बादल लागेको थियो तर उडान र अवतरणका लागि खतरा भने थिएन ।
जहाज नेपाल पुग्दा दिउँसोको २ बजिसकेको थियो।जहाजले अवरतरण गर्दा सामान्यभन्दा बढी समय लगायो। जसो तसो अवतरण भए पनि विमान सन्तुलन गुमाउँदै धावनमार्गको पूर्वतर्फ दुर्घटना ग्रस्त भयो। दुर्घटनामा परी ११ जना एमबीबीएसका विद्यार्थीसहित ४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। २२ जना यात्रुको राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताले जनाएको छ।
Prevपाईलटले नै यस्तो गरेपछि दनदनी जलेको रहेछ, बंगला बिमान ।बाहिरियो कहालीलाग्दो रहस्य ( भिडियो सहित)
Next१ मिनेट समय निकालेर पढ्नुहोला !! मन परे सेयर गर्नुहोला ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता भिडियो सहित
बाहिरियो सबै ३३ किलो सुन काण्डको भिडियो !गोरेका टिमले यसरी करेन्ट लगाएर मारेका थिए आफ्नै सहयोगीलाई ।